Akukho mgaqo ocacileyo malunga nexesha elingakanani umntwana omele azenzele yena, kwaye likhulu kangakanani iqela. Umdlalo ngowona mcimbi oyintloko womntwana. Ngendlela efanayo nomntu omdala, umsebenzi kunye neeklasi kwimisebenzi yokuzonwabisa yokuzithandayo. Kwaye bonke abantu abadala banokukhetha njani ixesha elide lokuzinikela kulo okanye kulo msebenzi, yenza kunye nomntu okanye omnye, kwaye abantwana bakhetha ngokukhethekileyo ifom yefowuni esondelene nabo okwangoku. Thelekisa nabanye, yenza ukuba udlale ngendlela ethile, ewe, akufanelekanga. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba ungayithobeli ingqalelo kuyo yonke imidlalo ekukhethwa ngumntwana, indlela abadla ngayo. Umdlalo ngowona msebenzi omkhulu, kwaye iifom zawo azixhomekekanga kuphela kwimeko yomntwana, kodwa umsebenzi wegeyimu ngokwawo unokuchaphazela ngqo ukubunjwa kwawo. Ngomdlalo, umntu omncinci uhlakulela ubuntu bakhe, ubuchule bubonakaliswa, umntu unokuthi nokuba yintoni na indlela umntwana edlala ngayo ngokuchaphazela ubomi bakhe abadala. Ngoko imidlalo yezingane kufuneka inike ingqalelo ekhethekileyo. Umdlalo ngamnye unalo ixesha lawo
"Unomdla!" Akayiyo isiqingatha sonyaka, kodwa uhlala esondela kwabanye abantwana, uthanda ukudlala nabo. " Ukuba abazali bathetha ngomntwana omncinci, mhlawumbi banokuphuma. Umntwana weminyaka engama-2.5-3 ayikwazi ukudlala kunye noontanga. Ngokuqinisekileyo, unomdla kwabanye abantwana kunye nemidlalo yabo, kodwa uyibize ngomdlalo ngokugcwele ngokupheleleyo, kuba akukho nxi Imidlalo yomntwana ukuya kwiminyaka eyi-1.5-2 ubudala ingabizwa ngokukhawuleza, oko kukuthi, uyadlala kulolu nqaku ngexesha elithandwayo. Yingakho abantwana beli lidala benza i-tarar epheleleyo ngokuzenzekelayo: ukuthatha ithoyizi enye kunye nokudlala kunye ncinane, ngokukhawuleza utshintshe enye into ayithandayo. Ngokwexesha elifanayo, umntwana uyakwazi ukuyijonga (kodwa kungekhona ixesha elide) emva kweminye imidlalo yabantu. Ukususela kwiminyaka emibili ukuya kwimithathu, abantwana banomdla ngakumbi kwimidlalo yodwa kunye neentshukumo okanye ezibizwa ngokuba yimidlalo efanayo, xa inkunzi idlala nayo, kodwa ilandele abanye abantwana. Oku kubonakala ngokucacileyo kwiqela leontanga okanye kwindawo yokudlala. Bonke abantu bayakha into ethile, nganye kwisayithi "yayo." Ngamanye amaxesha abantwana bawela kwaye ngokusobala baphazamisana, kodwa akulula kakhulu ukuthabatha inkunzi kwenye inxalenye yenkundla. Omnye uya kuba mnandi apho. Ukwenza wonke umntu adlale kunye ("Masithi siqokelele zonke iimoto kunye nokwakha igalaji enkulu enkulu) akuyi kuba lula nokuba, kulo mzekelo, umntu omdala kufuneka angene kumdlalo aze asebenze inkqubo." Kulo nyaka, abantwana abayazi ukuxoxisana, ukuseka imithetho, ukuseka oonxibelelwano Ngomdlalo ofanayo bafunda zonke ezi zinto.
Isigaba esitsha ekuphuhlisweni kweemidlalo kubantwana kuhlobene nemidlalo. Eli nqanaba lidla ngokuqala emva kweminyaka emithathu. Phakathi kwezingane kukho ukutshintshisana kwamathoyizi, baxelelana ngomdlalo wabo, ukuba ixesha elifutshane lize lenze inxaxheba, lihlelwe linye, kodwa umxholo wendaba kunye nemithetho ethile apho. Umntwana ngamnye udlala njengoko ebona kufanelekile. Kwaye emva kweminyaka emine, kukho izakhono zokudlala. Xa abantwana banokuqokelela kwiqela kwaye beka imithetho ethile yomdlalo, landela iinjongo zayo baze banamathele kwibali. Le midlalo yeqela ingaba nayiphi na - imidlalo, ukuqonda, ukudlala indima, kodwa nakweyiphi na inxaxheba kunye nesiqalo sokuqokelela. Ukuze ufezekise umphumo odibeneyo, umntwana ngamnye kufuneka ahlawule. Kwaye oku, ngokungathandabuzeki, sele sele iphumelele kakhulu. Zonke imidlalo ezedlule zihleli. Ngokuxhomekeke kwimeko, iimeko zengxaki ngamanye amaxesha zibuyela kubo.
Abazali cishe abazange bakhononde kwaye bangakhathazeki ukuba umntwana wabo ufuna ukudlala kuphela nabanye abantwana kwaye akanakuchitha ixesha elisele yodwa. Umsebenzi, ukuhlalisana kubonwa njengezimpawu eziqinisekisa ukuba impumelelo ebomini, kuba abantwana abanontlalontle bahlala bebangela uvuyo. "Kungakhathaliseki ukuba ungaphi, unokuthi ufumane izihlobo ngokukhawuleza, unokufumana into ethile ngokukhawuleza," "Unjalo onobuchule, othethayo, nakwintandathu yakhe uyazi ukuba nini kunye nantoni na ukuthetha," bathetha abantu abadala. Ewe, iimidlalo ezidibeneyo eziphuhlisa izakhono zonxibelelwano kwiimeko ezahlukeneyo, ukukwazi ukucwangcisa ukuziphatha kwazo. Nangona ulwazisa ngolwazi olunxibelelwano oluphakathi kwabantu lunokwenzeka xa umntwana ebheka nje indlela abanye badlala ngayo kunye nokuthetha. Kodwa ubuchule babo kulo mkhakha akunakwenzeka ngaphandle kokusebenza. Abantwana abathanda ukudlala kwinkampani badla ukuba bavule ngakumbi, kulula ukuxoxisana, ingakhathazeki ngokukodwa ngengxabano yokuhluleka. Nangona kunjalo, ungagxininisi umdlalo wedwa. Bafundisa ezininzi. Okubaluleke kakhulu kukuphuhliswa kwamandla abo okuzibandakanya. Ukuba akunjalo, umntu uya kuba ngumlutha kwabanye kwaye akahlali ekhethiweyo ekunxibelelaneni. Abantwana abangakwaziyo ukudlala ngokwabo bahlala bexhomekeke ekuziphatheni nasekuziphatheni okubi. Umntwana otyumkileyo uhlala kwaye utyumle isinyithi. Okanye umele ngewindow kwaye uyayikrazula emacaleni eentyatyambo. Okanye uqala ukunyelisa ikati yokulala. Ngenxa yokuba umntu ongakwaziyo ukudlala, uhlala eqala ukuphula into ethile. Umntwana owaziyo ukudlala ngaphandle kokuthatha inxaxheba kwabanye, uyazimela ngokuzimeleyo kunye nokudala - ukufumana isifundo esinomdla kunzima kakhulu. Ngokubanzi, musa ukukhetha uhlobo oluthile lwemidlalo. Zombini kunye kunye kunye zibalulekile ekuphuhliseni.
Maye sonke sihambe kunye!
Ukuba kubonakala kuwe ukuba umntwana akayidlala ngokwaneleyo kunye noontanga kwaye ufuna ukufaka kuye uthando lomhlanganisi, kufuneka uqale ufumanise ukuba ingxaki yangempela yile okanye umbono wethu.
Abazali abaninzi banomntwana ofanelekileyo. Hayi, akunakwenzeka ukwenza unyana okanye intombi efana neengcamango zethu. Kuninzi kuxhomekeke kwiimpawu ezingenasisiseko zesimiso se-nervous, kwaye umntwana uya kukhula ngokuvisisana kuphela xa sithatha le ngqalelo. Umntwana owaziyo ukudlala nabanye abantwana akavumi ukwesaba ukunxibelelana, kodwa ukhetha iindawo ezityebileyo kunye nemidlalo eyimfihlo. Akufuneki ukuba abe ngamabomu, ngenxa yezizathu "zokufuna ukuthetha ngokubanzi", efuna inkampani. Ingxaki inokuqwalaselwa yimeko apho umntwana engenalo ubudlelwane kunye noontanga. Umzekelo, awukwazi ukudlala ngaphandle kokuphula imithetho. Okanye lonke ixesha liphazamisa ukuxabana, ukulwa, okanye uloyiko. Kwenzeka ukuba abazali ngokwabo, mhlawumbi bengazi kakuhle, babe nesimo sengqondo esibi malunga nokuhlanganisana. Ukwesaba impembelelo embi okanye ubugwenxa kubantwana, bathabatha umntwana wabo kude nasezindaweni zokudlala zabantwana, balinde "kubantwana", uze uqinisekise ukuba ukudlala ndawonye kuhle. Khuthaza umdlalo womntwana, nokuba into ethile kumdlalo ayihambi ngendlela ongathanda ngayo. Mfundise kwaye uxolele, kwaye ubekezelele, kwaye ugxininise uqobo lwakhe, kwaye uncede - kodwa ungagxininisi, kodwa nje ngohlobo lweengcebiso kunye nezimvo. Nciphisa isangqa soqhagamshelwano, ukuba ubona ukuba kwinkampani enkulu, umntwana kunzima ukudlala.
... Kwaye ulungile
Yaye ukuba lo msebenzi uyinto echaseneyo - ukufundisa ukudlala yedwa? Sifunda kwakhona ukuziphatha kuqala.
Kunzima ukufaka umntwana uthando ngento enentsingiselo kuye. Abantwana abathi, njengolujelo, banqatshelwe ukunxibelelana okanye bahoywa, abayi kuze baqonde iingcamango zokuzibandakanya. Kunzima nakakhulu ukufunda ukudlala yedwa xa abantu bebona ukuxhomekeka njengengxaki. "Ngaba siya kuhlala ekhaya yonke imini? Ungafa ngokunyamezela!" Abantu abadala kufuneka bafumane imisebenzi yabo kwaye babonise umntwana ukuba unomdla kakhulu. Ngamanye amaxesha ukungakwazi ukudlala yedwa kukubonakalisa ukuphulwa kwengqalelo. Abantwana abanenkinga yokunqongophala kweemfuno banesidingo esingaphandle rhoqo, kunzima kubo ukugxila kwiingcamango zabo, ukugcina isicwangciso kunye nenjongo yesenzo. Kubalulekile ukuziqhelanisa nemidlalo eyodwa - oku kuya kuba yinto efanelekileyo yokongeza kwonyango jikelele. Enyanisweni, abazali baya kufuna ixesha elininzi kunye nomonde. Okokuqala kufuneka udlale kunye okanye ube nje. Jonga indlela umntwana edlala ngayo, cela imibuzo ngexesha lezenzo, phazanyisa xa ubona ukuba ukhathele. Ungazami ukumgcina edlala ixesha elide kunokwenzeka. Ngokuphambene noko, phazamisa xa ungasondli. Ngoko kuya kuba ngumdla, umnqweno wokubuyela kumdlalo kwakhona.
Kutheni amantombazana enqwenela ukuzithoba?
Indlela yokuphumelela uthando lomntu onqabileyo
Indlela yokugqoka iingubo zoboya obubonakalayo: imifanekiso ebonakalayo kunye nemifanekiso
Isaladi kunye ne-shrimps kunye ne-tomato sauce
Indlela yokuhlamba ihena hen kwizinwele
Ipate yeembotyi ezimhlophe kunye neTyhuna